Ogaden News Agency (ONA) – Taariikh Halganeedka CWXO – iyo Q3xaad ee Hawlgalkii CirJiidh
Posted by Dayr	/ May 16, 2013
Qaybtii 1aad iyo 2aad ee barnaamijkan waxaan kaga soo sheekaynay Hawlgalka Cirjiidh habkii loo abaabulay iyo siduu ku bilowday, waxayna qaybtii 2aad inoogu joogtay:- Shaahii aroornimo ayaanu ku karsanay Deegaanka Dhuurta waxaa uu wardigii ciidankan oo dib fiiriyay isagoo adeegsanayna qalabka loo isticmaalo fogaan araga (diirada) sifudud uu u arkayay ciidamda wayaanaha ee raadkayaga ku soo taagan oo markii hore naloosheegay in ay ahaayeen ciidan dhan 400 oo askari balse qaabka ay noola socdeen uusan ahayn cidaan weerar ah waxayse u ekaayeen ciidamo gaadmo ah. Isla wakhtigaasi waxaa nala soo istaagtay diyaarad ay ciidamada gumaysigu lahaan jireen oo fadhiyi jirtay garoonka Magaalada Qabaridahare nooceeduna ahaa Maanqaad. Diyaaradan oo wax yar uun kadib hawlgalka Cirdhjiidh ay ku guulaysteen in ay gubaan cutub katirsan ciidanka qalabka sida ee JWXO gaar ahaan qabytaa Danab iyadoo fadhida garoonka Magaalada Qabridahar waxayna goobtaasi ku dileen ciidan gaadhaya 17 askari oo Ethiopian ah.
Diyaaradani waxay ku duulaysay joog inta badan joog aysan gaadhin hubka fudud ee gacanta laga rido waxa hub ahna maridaynin balse waxay si fudud ula socon kartay wuxuu ahaa dhaq-dhaqaaqanaga. Sidoo kale waaxaan iyana ka qarsoomi Karin waa tirada uu ciidankanagu ahaa. Markiiba ciidankanagu waxa uu isu qaybiyay falaadho yaryar oo is hor iyo dababa maraya una socda qaab ciidan waxaananu ku guulaysanay in aysan diyaaradani helin tiradayada saxda ah iyo in aanan socdkana joojinin ilaa inta aanu ka gaadhayno goobta aanu rabnay.
Kadib markii aan ku guulaysanay in aanu gaadho dhulka istaraatijiga ahaa ee duleedka tuulada Xudur ayle gaar ahaan laagta Cadalay waxaa ciidamadii Wayaanaha ee wakhtigaasi nagu soo raad taagnaa isu-rogeen inay aadaan dhanka tuulada Maracaato. Sidoo kale waxay ciidan soo dageen tuulada Xudur ayle, ciidama kalna waxay soo dageen meel aan sidaasi nooga fogayn oo naga xigta dhanka Tuulada Wabiyar oo waqooyi markaasi naga ah.
Hadaba akhristayaasha sharafta lehow Ku soo dhawaada Qaybta 3aad ee barnaamijkeenan ahna qaybtii ugu danbaysay.
Halkan Ka Akhri Q3xaad